Ebe nchekwa Newbridge - IntoKildare
Dabere na mbara ala Curragh a ma ama, Newbridge bara ọgaranya n'ọdịbendị, ihe nketa, ịzụ ahịa na ebe nkiri - na -enye onye ọ bụla ihe. Na-emikpu onwe gị na kredit bara ọgaranya nke ndị ịnyịnya, banye na usoro ịre ahịa ma nwee ọ enjoyụ n'ọtụtụ nri nri na-emeri.
Newbridge dị na nsọtụ Curragh Plains ma Bog nke Allen na Pollardstown Fen gbara ya. Amaara mpaghara a nke ọma maka ịzụ ịnyịnya Irish, ọzụzụ na ịgba ọsọ, yabụ na ọ bụghị ihe ijuanya na ọtụtụ ndị gbara ya gburugburu bụ ugbo ugbo ụlọ yana Curragh Racecourse. Obodo gbasaa ngwa ngwa mgbe e wuru ogige Curragh na 19th narị afọ.
Obodo a, nke dị n'akụkụ Osimiri Liffey, nwere ike mara nke ọma maka ịbụ ụlọ nke Newbridge Silverware bụ ndị na -emepụta ebe a na -egbu egbu ebe a kemgbe 1934 na n'oge na -adịbeghị anya dịka inwe nnukwu ụlọ ahịa mpaghara na Ireland - Whitewater.
Obodo nta dị jụụ nke Athgarvan, Kilcullen na Allen dị nso yana ebe egwuregwu golf kacha ochie, Royal Curragh. Ma ọ bụrụ na ị gee ntị nke ọma, Curragh Plains na Hill Allen dị nso na -akọ akụkọ ifo nke St Brigid, na Fianna na Dan Donnelly.
19 nsonaazụ (s)
Gbọ ịnyịnya ịgba ọsọ nke mba Premiya nke Ireland na otu n'ime ebe egwuregwu egwuregwu kachasị mma n'ụwa.
Ahụhụ Na-agba ọsọ
Ahụmịhe ọdịbendị pụrụ iche nke na-agba egwuregwu egwuregwu nke ọtụtụ ntụrụndụ na ụfọdụ foto dị egwu na ohere vidiyo.